Lapho ungaya khona ngeHanukkah - World Tourism Portal
UHanukkah ungumJuda Umkhosi wezibani futhi ikhumbula ukwenziwa kabusha kweThempeli lamaJuda lesibili eJerusalema, kwa-Israyeli. Lokhu kwenzeka kuma-160s BCE / BC (ngaphambi kokuzalwa kukaJesu). (IHanukkah igama lesiHeberu nelesiAramiki elisho 'ukuzinikezela'.) IHanukkah ihlala izinsuku eziyisishiyagalombili futhi iqala ngomhla ka-25th weKislev, inyanga ekhalendeni lamaJuda elenzeka cishe ngasikhathi sinye ngoDisemba. Ngoba ikhalenda lamaJuda liyinyanga (isebenzisa inyanga ngezinsuku zayo), iKislev ingenzeka ukusuka ngasekupheleni kukaNovemba kuye ngasekupheleni kukaDisemba.
Ngesikhathi seHanukkah, ngobusuku obubodwa obuyisishiyagalombili, kukhanyiswe ikhandlela kukhethekile menorah (candelabra) obizwa ngokuthi a 'hanukkiyah'. Kunekhandlela lesishiyagalolunye elikhethekile elibizwa ngokuthi 'i-shammash' noma ikhandlela lezinceku elisetshenziselwa ukukhanyisa amanye amakhandlela. I-shammash imvama phakathi nendawo kwamanye amakhandlela futhi inesikhundla esiphakeme. Ngobusuku bokuqala kukhanyiswa ikhandlela elilodwa, ngobusuku besibili, kubili kukhanywa kuze kube yilapho sekukhanyiswe ngobusuku besishiyagalombili nobokugcina komkhosi. Ngokwesiko bakhanywa ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla. Isibusiso esikhethekile, sibonga uNkulunkulu, kuthiwa ngaphambi noma ngemuva kokukhanyisa amakhandlela futhi kuculwe iculo lamaJuda elikhethekile. I-menorah ifakwa efasiteleni elingaphambili lezindlu ukuze abantu abadlula babone amalambu bese bekhumbula udaba lukaHanukkah. Iningi lemindeni yamaJuda nemindeni ine-menorah ekhethekile futhi igubha iHanukkah.
IHanukkah nayo i isikhathi sokupha nokwamukela izipho futhi izipho zivame ukunikezwa ngobusuku ngabunye. Imidlalo eminingi idlalwa ngesikhathi sikaHanukkah. Okudume kakhulu yi-'dreidel '(Yiddish) noma' sivivon '(ngesiHeberu). Ingaphezulu ezine eziseceleni ezinobumba lwesiHeberu ohlangothini ngalunye. Lezi zinhlamvu ezine ziyincwadi yokuqala yebinzana elithi 'Nes Gadol Hayah Sham' elisho ukuthi 'Isimangaliso esikhulu senzekile lapho' (kwa-Israyeli, 'lapho' siguqulwa saba 'lapha' ngakho-ke ngu 'Nes Gadol Hayah Po'). Umdlali ngamunye ubeka uhlamvu lwemali, i-nati noma ushokolethi ebhodweni bese kuthi phezulu kube spun. Uma uhlolo luthi 'nun' (נ) akhuphuki lutho olwenzekayo, uma kungu 'gimel' (ג) umdlali uwina imbiza, uma kungukuthi 'hay' (ה) uwina uhhafu webhodwe futhi uma kungukuthi 'shin' (ngoba 'there' ש) noma 'pe' (ngo 'lapha') kufanele ufake enye into ebhodweni bese umuntu olandelayo enesipina!
Ukudla okuthosiwe emafutheni kudliwa ngokwesiko ngesikhathi seHanukkah. Izintandokazi zingama- “latkes” - ama-pancake ama-potato kanye ne-'sufganiyot' - ama-donuts ajulile womngane ogcwaliswa nge-jam / jelly futhi afafazwe ushukela.
Indaba ngemuva kukaHanukkah
Cishe i-200 BCE / BC U-Israyeli wayeyisimo eMbusweni waseSeleucid (umbuso owawubuswa ngaphansi komthetho wamaGrikhi) futhi wawuphethwe yiNkosi yaseSyria. Kodwa-ke, babengalandela inkolo yabo kanye nemikhuba yayo. Ku-171 BCE / BC, kwakukhona inkosi entsha ebizwa ngokuthi ngu-Antiochus IV, eyayizibiza nge-Antiochus Epiphanes okusho ukuthi 'u-Antiochus unkulunkulu obonakalayo'. U-Antiochus wayefuna wonke umbuso ulandele izindlela zokuphila zamaGrikhi nenkolo yamaGrikhi nabo bonke onkulunkulu bayo. Amanye amaJuda ayefuna ukuba amaGrikhi amaningi, kepha iningi lalifuna ukuhlala lingumJuda.
Umfowethu wompristi ophakeme wamaJuda wayefuna ukuba ngumGreki ngokwengeziwe, ngakho-ke wafumbathisa u-Antiochus ukuze abe ngumPristi Ophakeme omusha esikhundleni somfowabo! Ngemuva kweminyaka emithathu enye indoda yafumbathisa u-Antiochus nangokwengeziwe ukuba imenze uMphristi Ophakeme! Ukukhokha ukugwazela kwakhe weba ezinye zezinto ezenziwe ngegolide ezazisetshenziswa ethempelini lamaJuda.
Esendleleni ebuyela ekhaya lapho ebuya empini, u-Antiochus wama eJerusalema futhi wakhipha lonke ulaka lwakhe kulo muzi nakubantu abangamaJuda. Wayala ukuba izindlu zishiswe futhi amashumi ezinkulungwane amaJuda abulawa noma afakwa ebugqilini. U-Antiochus wabe esehamba eyohlasela ithempeli lamaJuda, isakhiwo esibaluleke kakhulu kwa-Israyeli kumaJuda. Amasosha aseSyria akhipha yonke ingcebo ethempelini kwathi ku-15 Kislev 168 BCE / BC u-Antiochus abeka isimo sikankulunkulu wamaGrikhi uZeus enkabeni yeThempeli lamaJuda (kepha lalinobuso buka-Antiochus!). Kwathi ku-25 Kislev wenza indawo engcwelengcwele ethempelini futhi wabhubhisa nemibhalo engcwele yamaJuda.
U-Antiochus wabe esekuvimbela ukwenza inkolo nenkolo yamaJuda (uma ngabe utholakala ukuthi wena nawo wonke umndeni wakho nibulawa) futhi nenza iThempeli laba yisakhiwo sikaZeus. KwakunamaJuda amaningi abulawa ngenxa yokholo lwawo. Ngokushesha emva kwalokho kwaqala ukuhlubuka kwamaJuda.
Kwaqala lapho kubizwa umpristi wamaJuda 'wangaphambilini' UMatheathias, waphoqeleka ukuthi enze umnikelo kuZeus esigodini sakubo. Wenqabile ukwenza lokho wabulala iSoldier yaseSyria! Amadodana kaMatathias amjoyina futhi abulala amanye amasosha edolobhaneni. UMatathias wayesekhulile futhi wafa kungekudala emva kwalokhu, kodwa indodana yakhe uJuda wabe esethatha izintambo ezilwela inkululeko. Igama lesidlaliso likaJuda kwakungu 'Maccabee' aqhamuka egameni lesiHeberu elisho isando. Yena namabutho akhe bahlala emihumeni balwa impi ecashile iminyaka emithathu. Base behlangana nabaseSyria empini evulekile futhi babahlula.
Lapho sebebuyele eJerusalema, ithempeli lase liyincithakalo futhi isithombe sikaZeus / Antiochus sasesimi. Bahlanze ithempeli. Bakha kabusha i-altare lamaJuda futhi ku-25 Kislev 165 BCE / BC, iminyaka emithathu impela ngemuva kokubekwa kwesithombe, i-altare neThempeli lanikezelwa kabusha kuNkulunkulu.
Kunemibono eminingana yokuthi kungani iHanukkah igujwa ngobusuku obuyisishiyagalombili. Enye inganekwane ithi ngenkathi uJuda nabalandeli bakhe bengena ethempelini kwakukhona uwoyela owanele ukushisa ubusuku obubodwa, kodwa ukuthi kwashiswa ubusuku obuyisishiyagalombili. Enye indaba ithi bathola imikhonto eyisishiyagalombili yensimbi bafaka amakhandlela kuyo bayisebenzisela ukukhanyisa ethempelini.
IHanukkah yilapho imindeni ihlangana khona. Kuyithuba elihle lokuhlangana, njengoba udla, zijabulisa futhi udlale imidlalo ndawonye.
Uma wonke amalungu omndeni ehlala edolobheni elifanayo akukho nkinga futhi uma engenayo futhi inkinga; ngoba ungathola kithi amathikithi anoma yikuphi ukuya khona ukuze ube seduze nomndeni wakho / nabathandekayo. Uma kunesidingo sokuqasha imoto noma ukuthola ihhotela singasiza futhi ngalokho.
Uma uthatha isinqumo sokuhamba ibhuku lakho nehhotela nendiza yakho / isitimela / ibhasi ngentengo enhle kakhulu.
Ukuthi uhlala ekhaya noma ukhetha ukuhamba, ekugcineni kumane nje ngokuba ndawonye!
Sazise ukuthi unqume kuphi nokuthi ugube kuphi iHanukkah 'kulo nyaka kumazwana angezansi!
Noma yini oyenzayo nokuthi uyaphi wngikufisela okuhle Hanukkah!